Xizi mbuli ewute Turkey Yurop mbuli ngosi
March 23, 2017 - 26, 15 Turkish Yurop mbuli ngosi ẹkenịmde ke Istanbul, Turkey, ndị exhibiti ...
March 23, 2017 - 26, 15 Turkish Yurop mbuli ngosi ẹkenịmde ke Istanbul, Turkey, ihe ngosi na-eweta ọnụ zuru ụwa ọnụ na mbuli ụlọ ọrụ yinye niile maara nke ọma ụlọ ọrụ. Dị ka anụ ụlọ mbuli ụlọ ọrụ si eduga escalator ngwaahịa Nsukka, suppliers na enye ọrụ na, Xizi mbuli kpọrọ exhibitors.
The ngosi, ndị West Igwe Mbuli ka saa mbara oghe ụlọ ndò na abụọ zuru ezu na-egosi na West mbuli azụmahịa uru, teknuzu ike na ahịa larịị, na a na usoro nke nwere ọgụgụ isi ọhụrụ ngwaahịa adọta ọhụrụ mba si gburugburu ụwa na-abịa ka ọhụrụ na ochie ahịa gakwuru Mkparịta, ha na ya nwere olileanya na na West nchekwa ihe na-omimi imekọ ihe ọnụ na nkịtị development. The ngosi, ndị West Igwe Mbuli ọzọ ụwa mbuli ụlọ ọrụ na-egosi na a siri ike ika ike na magburu onwe oru ike. N'ọdịnihu, West ga-agbalịsi ike inyocha mbuli, ma na-ekpe "aga" usoro atụmatụ, na-egosi ụwa ika ntụziaka.
Dị ka Turkish ọchịchị ẹkedọhọde mbuli ọrụ, n'ebe ọdịda anyanwụ mbuli a na mba ma na-ekpe ọtụtụ ọrụ dị, otu n'ime ndị classic Alacity oru ngo, mkpa obodo Alasehir na Turkey, nso lzmir, a a ise ala nke ụlọ ahịa na a 22 ala nke a ụlọ bụ a Alasehir oge a nwere ọgụgụ isi akara. Xizi nyere njem lifts, ọkụ lifts, escalators na walkways na izute ọhụrụ EN81 ọkọlọtọ na OA asambodo. N'ihi xizi, nke a abụghị naanị na ọ dị mkpa maka mmepe, ma ọrụ nke na-akwalite "mere na China" nke ụwa.
Win na co-ike - 2017 xizi mbuli ahịa nkekọrịta party
On February 24, n'ebe ọdịda anyanwụ igwe mbuli "ike echiche. Win na 2017 n'ebe ọdịda anyanwụ mbuli ahịa òkè party "ke w ...
On February 24, n'ebe ọdịda anyanwụ igwe mbuli "ike echiche. Win na 2017 n'ebe ọdịda anyanwụ mbuli ahịa òkè party "na n'ebe ọdịda anyanwụ hotel biri, Mr West n'otu President Chen Xiaxin, MS onyinye ọhụrụ Théo President, Mr West mbuli President Wen-chao Liu, n'ebe ọdịda anyanwụ igwe mbuli ahịa Executive MS lily Tse na ụlọ ọrụ management na magburu onwe si niile ná mba na-ere ahịa na ahịa J.Randall zukọtara, àmà ihe omume a ọnụ.
Party ke "Hangzhou ekele unu" song ụkwụ anya, mgbe ahụ, banyere otu si na isi njikọ - West mbuli renamed ememe. Otu e okpono ileta Lin'an Municipal Committee Dịwara Committee, Nwada Shen Hui na West ebuli mmekọ na-agba àmà nke a akụkọ ihe mere eme oge, ndị mmiri si niile n'akụkụ nke ụwa atọ "West" a na-eburu mmụọ nke Chinese mba n'ichepụta ụlọ ọrụ omenkà ika. West mbuli atọ ọtụtụ iri afọ nke mmepe, ìgwè, dị ka a dobe nke nkume eyi, osimiri na echekwa nke oké osimiri, bụ obere bit nke ìgwè igba a amamiihe taa. Taa Xizi inwego, agbajikwa akwuru si, pụtara oge ntoju, ga-abụ na ebube malitere a ọhụrụ njem!
Sochiri President Liu Wenchao na ahịa Executive director Xie Liping a ngụkọta nke a uri - "emefu West": okooko osisi na West, na-akpali iri atọ na isii afọ, anyị na-aga ọnụ tupu, oge ọ bụla m na-ede N'okpuru uri, nke mere na ifufe na-abụ abụ na-apụghị ịkọwa echiche ... ... olu nke uri recitation na a ndekọ nke ụlọ ọrụ ahụ si rụsie ọrụ ike na ajirija nke ochie photos, na-echeta onye ọ bụla azụ n'oge gara aga. The The The The The
Liu na Xie ngụkọta uri recitation nwekwara ka ngalaba-president nke West, Mr. Chen Xiaoxin obi na-adị, o kwuru na ndị West taa, rụzuru nke igwe mbuli bụghị mberede, ma site niile n'akụkụ nke ụwa ọ bụla pụtara ìhè onye na West nchekwa ihe na-arụ ọrụ ọnụ, na-akụkụ site n'akụkụ Ịgbasi mgba Ike na-abịa. Anyị nwere tost, na-ịchọrọ nke West Igwe Mbuli nnukwu ngosi, na-ekwe nkwa! The dum mgbede we juputa na mellow wine, onye ọ bụla na-aṅụ fun.
The ụdị nke party bụ ọgaranya na yi, ebube omume adịghị agwụ agwụ. The party kwadebekwara a na anya ụbọchị ọmụmụ ọzọ maka asaa ụbọchị ọmụmụ mmekọ, Mr. Liu Wenchao, President na Nwada Xie Liping, President of Marketing, onwe zigara ezi echiche na-emefu ihunanya oge na Ekliziastis.
The ọmarịcha abalị na-akpali akpali na ọṅụ wee njedebe, West Igwe Mbuli na a visual oriri meghere buteere nloghachi nke ediomi. Ọ bụrụ na e nweghị ebe obibi, ebe bụ na-awagharị awagharị - hụrụ n'anya mmekọ, welcome laa!
Na e kere eke nke West sub-mbuli ahịa òkè ga-eso ndị dị ebube, otú nọrọ na-ekiri!